Guddoomiye-xigeenka 1aad ee Golaha Wakiilada oo ka hadlay war laga faafiyay | Xarshinonline News
Guddoomiye-xigeenka 1aad ee Golaha Wakiilada oo ka hadlay war laga faafiyay
Posted by xol2 on July 8, 2010 · Leave a Comment
“Marka horeba guddiga talo-bixinta maanu gelin, Madaxweynahana…”
Hargeysa, (Nnn)- Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha Wakiillada Somaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale, ayaa beeniyay warar saxaafadda qaarkood faafiyeen oo la xidhiidhay inuu ka baxay guddi Madaxweynaha la doortay dhawaan magacaabay.
Cabdicasiis Samaale oo xalay u waramay Wargeyska Ogaal, waxa uu sheegay in marka horeba aanu xubin ka noqon guddi uu dhowaan Axmed-Siilaanyo u magacaabay inay ka soo talobixiyaan dhismaha Xukuumadda cusub, wuxuuna beeniyay in isaga iyo kuxigeenkiisa Baashe Maxamed Faarax ay ka baxeen guddigaas. “Warkaa Wargeyska Haatuf ku soo baxay waa been, sababtoo ah marka horeba aniga iyo Baashe Maxamed Faaraxba guddiga maanu gelin,” ayuu yidhi Cabdicasiis Maxamed Samaale. “Waanu ka cudurdaaranay, maadaama aanu nahay Shirguddoonka golaha Wakiillada oo ah golaha hadhow ansixin doona xukuumadda cusub. Sidaa aawadeed, guddigaa maaanu gelin, Madaxweynahana waanu la socodsiinay, magacyadayadu way ku soo baxeen, laakiin kamaanu mid noqon marna, wuuna naga aqbalay,” ayuu raaciyay.
Waxa uu si adag u beeniyay warkaas oo dulucdiisa lagu sheegay in sababo ismaandhaaf jira ay labadaa masuul guddiga uga baxeen, wuxuuna tilmaamay inuu ku faanayo hawsha uu xisbigiisa KULMIYE u soo qabtay, isla markaana wax ismaandhaaf ahi aanu ka jirin xisbigaas iyo guddiyadiisa.
Filed under somaliland, xeerdejin
← Ismaaciil Buubaa oo ka hadlay Isbeddelka dalka ka dhacay & waxyaabaha looga baahanyay M/weynaha la doortay
Wasiirka Hawlaha Guud oo ka hadlay masuuliyadda Hay’addaha Dawladda ka saaran hantida qaranka →